အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်း - ဗားရှင်း 1.0.9 | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အင်တာနက်က Apps ကပ » speed စမ်းသပ်
speed စမ်းသပ် APK ကို
! Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်းအင်တာနက်မြန်နှုန်း Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်စစ်ဆေးသင့်ရဲ့အင်တာနက်အမြန်နှုန်းမီတာဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု - အာဏာအရှိဆုံးကအင်တာနက်မြန်နှုန်းမီတာ, တိကျမှန်ကန်သောအစီရင်ခံစာနှင့်အတူ, စက္ကန့်အတွင်း Wi-Fi Speed ​​ကိုစမ်းသပ်။ အင်တာနက်မြန်နှုန်းစမ်းသပ် Wi-Fi ဟော့စပေါ့နှင့် GPRS (2G, 3G, 4G, LTE ကို) ၏မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ထောက်ခံပါတယ်။
Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်း - မြန်နှုန်းစစ်ဆေးမှု, အင်တာနက်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး tool ကို, စမ်းသပ်မှုတဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါအတွက်အရှိန်မြှင်။ ဒါဟာအင်တာနက် & Wi-Fi ၏မြန်နှုန်းစမ်းသပ်။ Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်း - မြန်နှုန်းစစ်ဆေးမှုအတိအကျ ping ရဲ့များ၏အမြန်နှုန်း, ဒေါင်းလုဒ်ကိုအပ်လုဒ်တင်ဆည်းပူးခြင်း, Wi-Fi ဟော့စပေါ့၏ကွန်ယက်လုံခြုံရေးသေချာစေရန်ကူညီပေးသည်။
✔️ Wi-Fi ဟော့စပေါ့၏ဒေါင်းလုပ်ခြင်းနှင့်လွှတ်တင်ခြင်းမြန်နှုန်းနှင့် Ping စုံစမ်း
✔️, download နဲ့ upload speed ကိုအပါအဝင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလဒ်သမိုင်းအတွက်ကွန်ရက်အမည်နှင့်စမ်းသပ်နေ့စွဲသင့်ရဲ့အင်တာနက်အမြန်နှုန်းစမ်းသပ်၏ခြေရာခံသိမ်းဆည်းထားပါ
✔️သင့်ရဲ့ကွဲပြားခြားနားသော 3g, 4g, LTE ကိုဆဲလ်စမ်းသပ်မှုနှိုငျးယှဉျ
✔️သင်သည် Wi-Fi နှင့်မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှု 2G, 3G, 4G LTE ကိုများအတွက်အောက်ပါစစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်နိုင် Wi-Fi Speed ​​ကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုခြင်း:
· Ping စမ်းသပ်မှု - စက်ကိရိယာနှင့်အင်တာနက်တို့အကြားကွန်ယက်ကိုနှောင့်နှေးစမ်းသပ်
· Jitter စမ်းသပ်မှု - ကွန်ယက်နှောင့်နှေး၏မူကွဲ
·ဒေါင်းလုပ်စမ်းသပ်မှု - ဘယ်လောက်မြန်မြန်သင်အင်တာနက်ကနေဒေတာတွေကိုရနိုင်
·စမ်းသပ် Upload လုပ်ပါ - သင်အင်တာနက်ဒေတာပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်မြန်မြန်
Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်း - မြန်နှုန်းစစ်ဆေးမှုသည်အခြားအမြန်နှုန်းစမ်းသပ်အဖြစ်ကိုဖုန်းမှတ်ဉာဏ်၏ထက်ဝက်ကိုတက်ယူပြီးပေါ့ပါးပါ! အများဆုံး Lite မြန်နှုန်းမီတာ!
Wi-Fi မြန်နှုန်း / အင်တာနက်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ဖို့ one-ကိုထိပုတ်ပါ။ speed စမ်းသပ်သုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေပါ! အကောင်းဆုံး Wi-Fi Analyzer!
ကိုယ့်စက္ကန့်ကို ယူ. , Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်းကိုအခြားမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုထက်အများကြီးပိုမြန်သည်တိကျမှုရလဒ်များကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ အလျင်မြန်ဆုံးအမြန်နှုန်းစမ်းသပ်! စမ်းသပ်ခြင်းမြန်နှုန်းမြန်!
speed စမ်းသပ် - မြန်နှုန်းစစ်ဆေးမှု download, ပိုက်ကွန်ကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ်ရန်နိုငျပါသညျ! အကောင်းဆုံးကအင်တာနက်မြန်နှုန်းမီတာ!
speed စမ်းသပ် - မြန်နှုန်းစစ်ဆေးမှုအလိုအလျှောက်ရွေးချယ်ထားသောစမ်းသပ် parameters တွေကို (Wi-Fi, GPRS / 2G / 3G / 4G / 5G မိုဘိုင်း) ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. နိုင်ပါတယ်။
★ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ပါဝါ
Network ကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်း - Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်း, မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုကွန်နက်ရှင်အမြန်နှုန်းစစ်ဆေး, သင့် Wi-Fi ပတ်ဝန်းကျင်မှာ scan ဖို့သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်! Wi-Fi Speed ​​စမ်းသပ်ခြင်း - မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်းတွင်အင်တာနက်အမြန်နှုန်းစမ်းသပ်အဘို့သင့်ကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါ!
5.44 ကို MB